Vaovao - Inona no ao amin'ny vahaolana IV?
Kitapo famokarana vahaolana tsy vita amin'ny kitapo IV izay soloina tavoahangy fitaratra, tavoahangy plastika ary infusions lehibe amin'ny sary mihetsika PVC, manatsara be ny kalitaon'ny fonosana fanafody. Ny multifunction ny famahanana sarimihetsika, ny fanontana, ny fanamboarana kitapo, ny famenoana ary ny famehezana ao amin'ny Shanghai IVEN Pharmatech Engineering Co., Ltd dia mahatonga ny firafitra ho tady kokoa, izay mampihena ny fandotoana ny tontolo iainana mandritra ny dingan'ny famokarana sy ny faran'ny fampiasana kitapo fonosana, hisorohana ny mety hisian'ny fandotoana faharoa mandritra ny fampiasana fanafody, ary fiarovana ny fiarovana ny fanafody. Mandritra ny fizotrany iray manontolo, ny milina dia ampiasaina hampanginana ny tavoahangy ary handefasana azy isaky ny gara. Noho izany dia tsy milatsaka ny tavoahangy ary tsy reraka koa ny vatana.
Ny fonosana dia mahafeno ny fepetra ara-toekarena amin'ny teknolojia vaovao, fitsitsiana angovo, fiarovana ny tontolo iainana, fanodinana ary fampandrosoana maharitra. Ny milina pharmatech anay dia afaka manome anao endrika tsy mitovy amin'ny kitapo PP miaraka amina seranan-tsambo tokana, seranana tokana / avo roa heny, seranan-tsolika malefaka malefaka sns.
Betsaka ny fanamboarana kitapo, izay azo ampiharina amin'ny famokarana tsipiriany isan-karazany toy ny 50ml-5000ml, miaraka amin'ny famaritana vitsivitsy sy fanoloana mora. Inona koa, manana rafitra tsotra sy mitombina izy, fandidiana azo antoka sy azo antoka, fikojakojana mety ary fahombiazan'ny famokarana avo. Kambana ny mekanisma ary kely ny faritra. Mifanaraka tanteraka amin'ny fenitry ny GMP izany. Ny haitao fanamafisam-peo mialoha sy iray hafa dia mety amin'ny interface amin'ny mpanamboatra samihafa mba hiantohana ny kalitaon'ny welding ary ny tahan'ny famoahana dia ambany noho ny 0,03%. Azo ampiharina amin'ny akora famonosana marika samy hafa izy io. Ankoatr'izay, ny rafi-pitantanana mihazakazaka sy ny fandefasana dia tsy mila rafitra fanaraha-maso 1 fotsiny, mpandraharaha 1 HMI ary 1. Farany, ny masinina ihany koa dia manodina ny detection auto sy ny rafitra fandavana diso mba hahafahantsika manasitrana an-tanana ny olana.